Hordhaca: Real Madrid vs Athletic Bilbao - El
Hordhaca: Real Madrid vs Athletic Bilbao – El
Real Madrid iyo Athletic Bilbao ayaa caawa ku kulmaya semi-finalka Supercopa de Espana, iyagoo ka warqaba in Barcelona ay baaqi kusii ahaan doonto finalka ka dib markii ay xalay rigoorayaal kaga badiyeen Real Sociedad.
Taageerayaasha ayaa weydiisanaya inay mar kale arkaan El Clasico finalka Barcelona iyo Real Madrid, madaama kulankoodii horyaal ee xilli ciyaareedkaan uu guul weyn u ahaa Los Blancos.
Real Madrid iyo Athletic Bilbao ayaan wax guuldaro ah la kulmin labadii kulan ee ugu dambeeyay, iyada oo heshiis dhex mari doona Real Madrid iyo Osasuna horaantii todobaadkan garoonka Storm Filomena. taas oo dhalisay barbaro.
Laakiin muran ayaa ka dhashay ciyaarta, iyadoo Real Madrid ay weerartay maamulka LaLiga, kuwaas oo ku jawaabay in kooxdu aysan waligood codsan in dib loo dhigo, halka Wasaaradda Gaadiidka ay ka hadashay qorshaha ciyaartoyda Real Madrid ee Pamplona kaasoo ku soo bilowday waqti halis ah.
In kasta oo 70% Real Madrid ay gacanta ku hayeen ciyaarta, ma aysan helin wax gool ah laakiin taa badalkeeda waxay ku sii carareen Thibaut Courtois.
Zinedine Zidane waa inuu hada guuleysto kulankaan si uu u gaaro finalka Barcelona, ​​hadii uu ku guuleysto koobka, wuxuu kordhin doonaa tirada koobabka uu ku guuleystay mudada gaaban.
Xilli ciyaareedkaan si wanaagsan ugama bilaaban Real Madrid, waxaana jiray waqtiyo mustaqbalkiisa shaki ku jiro, gaar ahaan maadaama ay dhawaan ka harayaan Champions League, waana inay difaacdaan koobkii sanadkii hore ka dhacay Saudi Arabia.
Los Blancos ayaa ku guuleysatay tartanka in ka badan Barcelona (13 jeer) waxayna ku guuleysatay 11 jeer.
Kulanka: Real Madrid vs Athletic Bilbao
Tartan: Spanish Super Cup
Real Madrid ayaa u ciyaari doonta daafaca reer Spain Dani Carvajal, kaasoo dhameystiray ganaaxii ciyaarta, laakiin waxaa soo gaaray dhaawac keyd ah.
Lucas Vazquez ayaa ku soo bilaabaya garabka midig iyada oo uu maqan yahay Carvajal, laakiin Zidane ayaa la filayaa in uu isbadal ku sameeyo khadka dhexe isaga oo ka bilaabaya halyeeyga Federico Valverde kaas oo la wareegay sanadkii hore.
Dhaawaca Luka Jovic dartiis, Real Madrid waxaa ka maqnaan doona Karim Benzema inta ka harsan xilli ciyaareedkaan.
Bilbao, ma jiraan wax walwal ah oo ku saabsan dhaawacyada, iyo haddii aan la xakameynin, waxaa jira xoogaa shaki ah daafaca bidix Yuri Berchiche.
Ilhan Omar calls Trump a ‘tyrant’ after she voted for